Ikhaya leBlarney elinombono
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguJohn
Indlu yaseMaryville eBlarney yindlu yokulala eThulekileyo yokutyela ene-10 imizuzu yokuhamba ukuya kwinqaba yaseBlarney kunye neLali yaseBlarney. Ubutofotofo, obucocekileyo obungenachaphaza, abahambi abaqondayo baya kuyithanda le ndawo. Yindawo entle yokuvala iHlabathi kwaye uphumle. Iitawuli ezithambileyo, izinto zangasese ezilungileyo. Umabonwakude ngeXbox kunye neNetflix. Lala njengosana, iibhedi ezitofotofo.
Butofotofo, eli khaya libonelela nge-oasis yokuzola kunye nentuthuzelo ...
Siyilungiselele kunye nawe, lundwendwe oluqondayo, engqondweni. Ibhedi enkulu ilingana nenkosi enxibe umqhaphu omtsha.
I-WiFi isimahla ukuyisebenzisa.
Ikhaya likwanendawo engaphandle ye-3 kunye negadi ene-awning enokurhoxiswa.
Umatshini weNespresso, iNutriBullet
5 min ukuhamba ukuya kwisikhululo sebhasi. Imizuzu eli-15 ukuya esixekweni ngeMoto / Ibhasi / iteksi.
Uphuma nje kuhola wendlela uN20.
I-Centra Supermarket Ifumaneka kwiLali 10 imizuzu yokuhamba,
Dunnes, Aldi & Lidl iivenkile ezinkulu ezikufutshane-konke ngaphakathi 10 imizuzu Drive e Blackpool.
Ilungele ukutyelela iSixeko saseCork kunye neendidi zeshishini okanye ukuzonwabisa.
Iindwendwe zikhululekile ukufikelela kuzo zonke iindawo zekhaya.
Indawo yokupaka yabucala, egutyungelwe yiCCTV, yeemoto ezi-2 ziyafumaneka kwi-driveway. Indawo engasemva ikhuselwe, yabucala, ezinye iindawo ezi-2 zokuhlala zangaphandle zinembono yemithi ye-oki yendawo kunye nokuhamba.
Intombi yam ihlala kwigumbi elidityaniswe nendlu kwaye inokunceda ngokungena okanye i-Enqures.
Iinkonzo zokuhlamba iimpahla ziyafumaneka xa ziceliwe kwiwasha esomisi,
Zonke iingcango zokuphuma zingasetyenziswa ngaphandle kwezitshixo xa kunokutsha.
IBlarney yilali engaphandle kwesixeko saseCork, kumazantsi ntshona eIreland. Inqaba yayo yenkulungwane ye-15 iBlarney Castle likhaya lembali yaseBlarney Stone, eyathi inike "isipho se-gab" kwabo bayiphuzayo. Indawo yepaki ebanzi ejikeleze le nqaba ibonisa uthungelwano lweendlela, iigadi ezinemixholo kunye neBlarney House enkulu. Isakhiwo senkulungwane ye-19 kwiziko lelali sihlala kwindawo eyayisakuba yiBlarney Woolen Mills.
Iindwendwe zingaqhakamshelana nam nanini na.
Sihlala kufutshane kwaye sinokubonelela ngoncedo xa lufuneka.